October 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
October 30, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dadaalada gurmadka loogu uruurinayo dadka ku waxyeeloobay fatahaada Beledweyne ayaa maanta oo Khamiis ah ka bilaabmatay magaalooyinka waa-weyn ee Puntland. Dhalinyaro is abaabushay ayaa lagu arkayay gudaha magaalada Garoowe ee caasimada Puntland kuwaasoo […]
October 28, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka dowladda Puntland ayaa maanta oo Isniin ah ansixiyay ajandaha kalfadhiga 45-aad. Qodobada ugu waa weyn ee ajandaha ayaa waxaa kamid ah ansixinta miisaaniyada 2020, ansixinta guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland, […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah xarunta madaxtooyada Garoowe kulan kula yeeshay safiirka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan. Kulanka ayaa diirada lagu saaray arrimo kala duwan […]
October 26, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Kalfadhiga 45-aad ee golaha baarlamaanka dowladda Puntland ayaa maanta oo Sabti ah ka furmay caasimada Garoowe. Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa si rasmi ah u furay kalfadhiga oo socon doona ku dhawaad 45 […]
October 24, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirkada Shiinaha laga leeyahay ee CCECC ayaa dayactir ku samayn doonta wadada isku xirta Garoowe iyo Boosaaso. Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Khamiis ah xarunta madaxtooyada Garoowe kulan kula […]
October 19, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa joojisay xafiisyada ay xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ka furanayaan deegaanada Puntland, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. “Wasaaradda arrimaha gudaha, federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland ayadoo […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaaradda cadaalada iyo diinta iyo awqaafta Puntland ayaa maanta oo Sabti ah kulan la yeelatay culimada ku sugan magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. Labada dhinac ayaa isku afgartay in si wadajir ah loo […]
October 17, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Khamiis ah dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso. Waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay masuuliyiin katirsan dowladda iyo dad shacab ah oo ay ku […]
October 16, 2019 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Taliyaha saldhiga dhexe ee ciidanka booliiska Puntland ee magaalada Gaalkacyo ayaa ka badbaaday qarax loogu rakibay gaarigiisa maanta oo Arbaco ah. Taliye Cabdiqani Jaamac Axmed oo loo yaqaan Xaabuun ayaa warbaahinta u sheegay […]